रुकुम घटना : शोकाकूल परिवारलाई दशा, युट्युबरलाई दशैँ « Chhahara Online
रुकुम घटना : शोकाकूल परिवारलाई दशा, युट्युबरलाई दशैँ
शोकाकूल परिवारका सदस्यहरुको मुहारमा क्यामेरा तेस्र्याउनुअघि युट्युबरहरुले यसरी सम्झाउँछन् । आफन्त गुमाएका शोकाकूल परिवारको स्वतःस्र्फुत आँशु बग्छ । कोही नरोइ एकाग्र भावुक हुन्छन् ।
पीडा भएपनि रुँदारुँदा सकिएको आँशु युट्युबरका लागि भन्ने बित्तिकै कहाँ आउछ र ? मन रोएकै छ तर आँखामा आँशु निकाल्न बाध्य पार्छन् ।
सुन्दै जाँदानयाँ खुलासा त यस्तो पो रहेछ, प्रहरी हिरासतमा भएका कारण उनी मिडियामा आउन नसकेकी रहिछन् । के त्यही हो नयाँ खुलासा ? मानिसलाई झुक्काउने, ठग्ने र बेवकुफ बनाउने ? रुकुम घटनाको दोषी को हो भनेर काठमाडौँमा झाँक्रीसँग समेत अन्र्तवार्ता लिएको भेटियो । झाँक्रीले नै दोषी पत्ता लगाउने भए किन चाहियो प्रहरी, किन चाहियो अदालत ?
-साभार : रातोपाटी